Kuthetha ukuthini ukuphupha ooFezela? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ngaba ubenephupha ngoonomadudwane kwaye ufuna ukwazi ukuba lithetha ukuthini?
2 Intsingiselo yokuphupha ngoonomadudwane ngokubanzi
3 Ukuphupha ngokuhlaselwa kweScorpio
4 Ukuphupha ngeScorpion sihamba ngezixhobo
5 Ezinye iintsingiselo ngoonomadudwane
Ngaba ubenephupha ngoonomadudwane kwaye ufuna ukwazi ukuba lithetha ukuthini?
Ukuphupha ngoonomadudwane kunokuba neentsingiselo ezahlukeneyo kwaye apha siza kubonisa ezona ziqhelekileyo. Ngaba ungathanda ukwazi ukuba kulungile okanye kubi? Sele uyazi ukuba ukutolikwa kwephupha ngalinye kuyahluka kuye ngomntu umntu, ke kukuwe ukuba ujonge ngeenxa zonke kuwe kwaye ulitolike ngeyona ndlela intle.
Xa bephupha ngoonomadudwane abaninzi bakholelwa ukuba ngumqondiso ombi, kuba kwinkcubeko yaseNtshona inambuzane enjalo ilayishwa ngeentsingiselo ezimbi ezinje: ukungcatsha, ityhefu, ingozi, idrama, iintlungu, ukothuka nokufa. Nangona kunjalo, nokuba ijikelezwe zizinto ezimbi, iphupha elinonomadudwane alisoloko linxulunyaniswa nento embi njengoko sinokubona.
Intsingiselo yokuphupha ngoonomadudwane ngokubanzi
Ngokubanzi, ukuphupha unomadudwane kubonisa ukuba uphila umzuzu obaluleke kakhulu ebomini bakho. Ixesha apho iziganeko ezihle kakhulu okanye ezimbi zinokwenzeka, kuxhomekeke kwindlela elaphupha ngayo inambuzane. Ukongeza, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo into yokuba inokubonisa uloyiko lokuphila okanye lokudlula kwiimeko ezikwenza uzive ungonwabanga, okususa ukuzithemba kunye nozinzo. Kule meko, iphupha beliya kuba sisibonakaliso soloyiko lokusilela kwakhe, kakhulu njengesixhobo sokujonga esibonelelwa ngoonomadudwane xa sibekwe embindini wesangqa somlilo.
Kodwa njengoko besitshilo ngaphambili, intsingiselo yokuphupha ngoonomadudwane inokuba yinto elungileyo okanye engalunganga, kuxhomekeke kwinto oyiphuphileyo nendlela ophuphe ngayo. Nceda ufunde oku kulandelayo ngenyameko!
Ukuphupha ngokuhlaselwa kweScorpio
Ngaba waphupha ukuba unomadudwane wakuhlasela wakutyhefu? Oku kunentsingiselo engathandekiyo, ebonisa ukuba unokufumana ukungcatshwa okuthile okanye uza kushiywa kungekudala. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele iinkcukacha zephupha, njengoko kuyinyani enokwenzeka kwindawo ethile yobomi bakho, hayi kwicandelo lothando. Umzekelo, kunokuthetha ukuba iprojekthi oyingenisileyo emsebenzini iya kuyeka.
Ukuphupha ngeScorpion sihamba ngezixhobo
Ukuba unomadudwane ephupha edlula kwimpahla yomntu othile, oko kuthetha ukuba kufuneka ulumke kakhulu ngayo, kuba inokukukhathaza komnye umcimbi. Ukuba isinxibo sesomlingane wakho, luphawu lokuba kukho amathuba aphezulu okuba sele ikho okanye nokuba kukho ukungathembeki.
Njengoko besesitshilo, kukwakho neentsingiselo ezintle, kuba ukuba uphupha ukuba utya unomadudwane, kubonisa ukuba iimeko ezinzima zinokwenzeka, kodwa uya kuphumelela nokuba yeyiphi na ingxaki.
Ezinye iintsingiselo ngoonomadudwane
Enye intsingiselo yokuphupha ngoonomadudwane sisidingo sokuphelisa iingcinga ezimbi, uloyiko olugqithisileyo kunye nokungathembani okungenasiseko kubomi bakho bemihla ngemihla obunokuthi bubonakalise ubomi bakho. Kule meko, kunempilo kakhulu ukwenza uvavanyo lwezona zinto ziphambili ebomini bakho ukukhuthaza utshintsho olusondeleyo, olujolise kwezona ndawo zibuthathaka ezifuna ingqalelo ethe kratya.
Ngamafutshane, unomadudwane unokubonisa ukuba ubomi bakho bumi bhuxe kakhulu, kwaye kubalulekile ukuba uyeke imikhwa ethile esele ikhobekile kwaye ufuna ukuvuselelwa ukhangele ubomi obutsha nobungcono! Ke ngoko, ukuphupha ngoonomadudwane kunokuba nzima kakhulu, kubangele ukuba umntu ophuphayo acinge ngemicimbi ephambili yobomi betyuwa kunye neenqobo zabo kunye neendlela zabo zokucinga, njengoko isenokuba lelona xesha lilungileyo lokutshintsha iikhonsepthi.
Yazi ukuba amaphupha asebenza njengesilumkiso esivela kwi-subconscious yethu, ngamanye amaxesha sele enze umcimbi othile kodwa thina ngokwethu asikenzi oko okwangoku. Kukule ngqiqo ke ukuba amaphupha asilumkisa amaxesha amaninzi, ke ukuba uphuphe ngoonomadudwane unokutolikwa ngeendlela ezininzi, kuxhomekeke kuwe ukuba ujonge ubomi bakho kancinci.